RootProject စျေး - အွန်လိုင်း ROOTS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို RootProject (ROOTS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ RootProject (ROOTS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ RootProject ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
ROOTS – RootProject
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ RootProject တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
RootProject များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
RootProjectROOTS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0573RootProjectROOTS သို့ ယူရိုEUR€0.0484RootProjectROOTS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0438RootProjectROOTS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0521RootProjectROOTS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.509RootProjectROOTS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.36RootProjectROOTS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.26RootProjectROOTS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.213RootProjectROOTS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.076RootProjectROOTS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0799RootProjectROOTS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.26RootProjectROOTS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.444RootProjectROOTS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.311RootProjectROOTS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.29RootProjectROOTS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.9.67RootProjectROOTS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0785RootProjectROOTS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0876RootProjectROOTS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.78RootProjectROOTS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.398RootProjectROOTS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.1RootProjectROOTS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩67.99RootProjectROOTS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦22.12RootProjectROOTS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.17RootProjectROOTS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.57
RootProjectROOTS သို့ BitcoinBTC0.000005 RootProjectROOTS သို့ EthereumETH0.000149 RootProjectROOTS သို့ LitecoinLTC0.00105 RootProjectROOTS သို့ DigitalCashDASH0.000631 RootProjectROOTS သို့ MoneroXMR0.000643 RootProjectROOTS သို့ NxtNXT4.47 RootProjectROOTS သို့ Ethereum ClassicETC0.00844 RootProjectROOTS သို့ DogecoinDOGE16.53 RootProjectROOTS သို့ ZCashZEC0.000695 RootProjectROOTS သို့ BitsharesBTS1.76 RootProjectROOTS သို့ DigiByteDGB1.83 RootProjectROOTS သို့ RippleXRP0.203 RootProjectROOTS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00197 RootProjectROOTS သို့ PeerCoinPPC0.19 RootProjectROOTS သို့ CraigsCoinCRAIG26.1 RootProjectROOTS သို့ BitstakeXBS2.44 RootProjectROOTS သို့ PayCoinXPY1 RootProjectROOTS သို့ ProsperCoinPRC7.19 RootProjectROOTS သို့ YbCoinYBC0.00003 RootProjectROOTS သို့ DarkKushDANK18.38 RootProjectROOTS သို့ GiveCoinGIVE124.07 RootProjectROOTS သို့ KoboCoinKOBO13.05 RootProjectROOTS သို့ DarkTokenDT0.0528 RootProjectROOTS သို့ CETUS CoinCETI165.45
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 08:30:03 +0000.